ILibreOffice izoba nokuxhaswa okungcono nokuhlanganiswa noMariaDB | Kusuka kuLinux
ILibreOffice izoba nokuxhaswa okungcono nokuhlanganiswa noMariaDB
Ukucaphuna kusuka ku- Wikipedia:
MariaDB Yisiphakeli semininingwane esuselwe ku-GPL esinelayisense se-GPL. Isekelwa nguMichael "Monty" Widenius (umsunguli we MySQL) kanye nomphakathi wabathuthukisi be-software yamahhala. Inenjini ebizwa ngokuthi I-XtraDB, esikhundleni InnoDB. Inokusebenzisana okuphezulu ne-MySQL ngoba inemiyalo efanayo, izixhumi ezihlangene, ama-API kanye nemitapo yolwazi, inhloso yayo ukukwazi ukushintshela iseva eyodwa iye ngqo
Yebo, esihlokweni esishicilelwe ku- Ibhulogi Yesisekelo Sombhalo, dalula izinga lokuncoma okuzwayo Monty por LibreOffice, lapho iveza okuningana noma okuncane okulandelayo:
«Sijabule kakhulu ngale phrojekthi LibreOffice… Ukwenza ingxenye yethu nephrojekthi sizibophezele ekuhlanganiseni nasekuhlinzekeni ukwesekwa okuhle kakhulu MariaDB kuLibreOffice. Lokhu kufaka phakathi, phakathi kwezinye izinto, okusha Abashayeli be-LGPL C ukuxhuma MariaDB o MySQL futhi unikeze ukulungiswa kwamaphutha nganoma yiziphi izingqinamba eMariaDB ezithinta kakhulu LibreOffice«
Ungabona okuningi ku- lesi sixhumanisi. Ngaphandle kokungabaza, izindaba ezinhle zomhlaba I-OpenSource y IHhovisi Suite. Ukwenza ngcono Isizinda seLibreOffice nalesi sibakaki?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » ILibreOffice izoba nokuxhaswa okungcono nokuhlanganiswa noMariaDB
Ngokufika kwe-Oracle nokwehlukaniswa kwabo nabo, akubonakali kungajwayelekile kimi.
I-MySQL nayo ivela ku-Oracle futhi iyaqhubeka nokuguqulwa kunguqulo yayo yomphakathi, ezinye izandiso ebezivame phambilini zisusiwe futhi ngicabanga ukuthi lokho kungenye into.
Njengoba ngangiqonde ukuthi basebenzise i-HSQLDB yolwazi, ngoba ibhalwe ngokuphelele kuJava. Kuyafana futhi badinga kuphela ukuguqula umshayeli we-MySQL jdbc.
Ngakho-ke uma ubuhlakani be-Oracle (abanikazi bamanje be-MySQL) becabanga ukwenza into efanayo abayenze nge-Open Office, enye indlela izosetshenziswa.
Inkinga ukuthi, bekuzokwenzekani uma i-Oracle ithola igebe elisemthethweni elilivumela ukuthi linikeze ilungelo lobunikazi i-MySQL API? Esikhathini esithile esidlule kwathiwa i-Oracle ifuna ukulandela lelisu ukunqanda ukuncintisana:
Ukuze i-API iqondakale, kungaba igama lemisebenzi, okuguquguqukayo, amakilasi, njll., Into engenangqondo ngokuphelele kepha evela ku-Oracle ...
Uma kunjalo uMonty uzophoqeleka ukuthi akhe kabusha iMariaDB API ukugwema izinkinga zomthetho, kepha futhi kuzophela ukusebenzisana ne-MySQL.
Ngabe uMonty akanamandla phezu kwendalo yakhe?
mmm ... Angiqiniseki, kuzofanele ngifune imininingwane engaphezulu, kepha ngicabanga ukuthi inikeze wonke amalungelo kumaSun Microsystems nawo athengwe yi-Oracle, ngakho-ke i-Oracle iyona enamalungelo e-MySQL .
Noma kunjalo, ngenkathi ikhodi yomthombo kaMariaDB isazokhululeka, izolawulwa ngamalungelo obunikazi, empeleni angayenza ibe yisoftware ephathelene.
Impela, inqobo nje uma i-Oracle ikwazi ukwaba ubunikazi bezingxenye zekhodi yomthombo njengoba kuchaziwe ngaphambili. Uma ungeke ukwazi, lapho-ke ngeke kube khona nkinga yezomthetho noMariaDB.
Uhm futhi kuthiwani ngelayisense? Noma bakhohlwa ukuthi inelayisense ye-GNU GPL nokuthi bayaboshwa ngoba ngokwelayisense le-GNU GPL:
I-GNU General Public Licence noma yaziwa kangcono ngegama layo ngesiNgisi i-GNU General Public License noma umane nje umusho wayo ovela ku-English GNU GPL, ilayisensi elenziwe yiFree Software Foundation ngo-1989 (inguqulo yokuqala), futhi ihlose ukuvikela ukusatshalaliswa kwamahhala, ukuguqulwa nokusetshenziswa kwesoftware. Inhloso yawo ukumemezela ukuthi isoftware embozwe yile layisense isoftware yamahhala nokuyivikela emizameni yokwabiwa kwemali evimbela leyo nkululeko kubasebenzisi.
Ngiqonde ukuthi, ake ngichaze uma ngabe i-Oracle ifuna ukwenza ilungelo lobunikazi ngesoftware ethile ngelayisense le-GNU GPL.Free Software Foundation ingayimangalela ngokwephula ilayisense.
U-Oracle ukuba ngumnikazi wekhodi namalungelo e-MySQL angenza noma yini ayifunayo ngayo, angaguqula nelayisense avale ikhodi futhi ne-FSF ayikwazi ukwenza lutho kubo ngoba ababhali bangabanikazi bezinhlelo zabo ngokuphelele.
Lokhu inqobo nje uma i-MySQL incike kunoma iyiphi enye i-GPL noma i-software enelayisensi yokukopisha
Ungashintsha ilayisense yezinguqulo ezizayo, kepha lokho osekuvele kumahhala kungaba yimfoloko bese uqhubeka nelayisense le-GNU GPL. Futhi ukufuna ukuthi banelungelo lobunikazi lekhodi, futhi ngicabanga ukuthi nabo banelungelo lobunikazi lolwazi. Yize ubona konke.
Enye into ukuthi noma ngabe bekwazile ukwenza i-patent ye-MySQL, angicabangi ukuthi u-Oracle ufuna ukuba ngumuntu omubi kule movie, (okubi kakhulu kunalokho obekulokhu kunjalo nge-Open Office).
Ngokuqondile, i-Oracle ingashintsha ilayisense le-MySQL kepha lokho akuthinti izinhlobo zangaphambilini, ukuphela kwento engathinta izinhlobo zangaphambilini amalungelo obunikazi.
Udaba lobunikazi, noma ngabe luyisoftware noma yini, luyinkimbinkimbi futhi luholela ekubambezelweni kwezobuchwepheshe.
Ubuntu Software Center izoba nokwesekwa kwe-PayPal